မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့လေးကို အမှတ်တရပုံတွေနဲ့တကွ ပြသခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန်း - Myanmarload
မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့လေးကို အမှတ်တရပုံတွေနဲ့တကွ ပြသခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန်း
လွန်ခဲ့သော ၁၁ လ က 15:07 September 10, 2019
လိုက်ဟဲဗီးလ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေအဆက်မပျက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ လက်တလော လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပရိသတ်တွေလည်း သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှတဆင့် တွေ့မြင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေများစွာပြုလုပ်နေပေမယ့်လည်း အောင်လအန်ဆန်းကတော့ မိသားစုအတွက် အချိန်ပေးလေ့ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ မကြာသေးမီကလည်းအောင်လအန်ဆန်းကတော့ သူ့ရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကို ပြသခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။
Photos credit - Aung La Nsang's fb account
အောင်လအန်ဆန်းကတော့ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲလေးကတော့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကတော့ များစွာသိမ်းဆည်းထားဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ ပုံရိပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အောင်လအန်ဆန်းကတော့ " Happy Belated Anniversary to Katie Oliphant. Photos by my sis in law Jamie Weaver. 9-7-2015 onabeautiful day!" ဟူ၍ ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ဖတ်မိစုံစုံလင်လင်နဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပြီး ပျော်ရွှင်နေတဲ့ အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မကြာမီယှဉ်ပြိုင်မည့် ပြိုင်ပွဲမတိုင်မီ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့လေးကို ပုံရိပ်တွေနဲ့အတူ ပြသခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။